Thailand: Korontana ho an’ny Praiminisitra ny hafatra an-tsoratra amin’ny finday · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2010 17:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Português, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Swahili, Español, English
Raha mamaly ny mpanjifa iray dia misy raki-peon'ny Praiminisitra Abhisit halefa any amin'ny findain'ilay mpanjija, izay milaza hoe:
Raha ny hevitry ny mpiasa ao amin'ny Antoko Demokraty, hevitr'i Abhisit manokana ny fandefasana hafatra amin'ny finday, ary nokarakarain'i Korn Chatikavanij, Ministry ny fitantanam-bola any amin'ny firenena. Voalaza fa nantsoin'i Korn ireo mpandraharaha ara-pifandraisan-davitra telo lehibe any Thailand: AIS, DTAC, sy i True, mba hiara-miasa amin'ny fandefasana ny hafatra amin'ireo mpanjifan-dry zareo. Natao tamin'ny 16 Desambra ny fihaonana ho an'ny fiaraha-miasa, iray andro mialohan'ny nanambaràna ofisialy an'i Abhisit Vejjajiva ho Praiministra. Ary ny antony nangatahana ireo isa 5 fanalahidin'ny finday dia ny mba hahafahana maminavina ireo tahan'isan'ireo izay namaly. Halahatra anaty tahirin'isa arak'izany ireo mpanjifa namaly.
Azo lazaina ho fandikana ireo zo manokan'ny mpanjifa ny fandefasana hafatra ho an'ilay olona raha tsy nanaiky izy, hoy ny mpisolo vava miaro ny zon'ny mpanjifa iray Saree Ongsomwang. Niteny izy fa tokony nisafidy ny hifandray amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ireo toeram-pivarotana hafa momba ny fifandraisana amin'ny vahoaka i Abhisit mba hialana ny fanitsahana ireo zon'ny mpanjifa.
Eo ambanin'ny Lalàna iadiana amin'ny kolikoly tamin'ny taona 1999 (novaina tamin'ny 2007), tsy mahazo mandray fanomezana na tombon-tsoa mihoatry ny 3,000 Baht ireo mpiasam-panjakana; anisan'izany ireo mpikambana amin'ny mpanolo-tsaim-panjakàna. Heverina anefa fa mitentina mihoatra ny 10 tapitrisa Baht ny fandefasana ny hafatra an-tsoratry ny Praiministra. Mety ho helohina eny amin'ny fitsarana i Abhisit raha ny hevitr'i Pheu mpitondra tenin'ny Antoko Thai Prompong Nopparit, izay mampirisika ny Komisiona Nasionaly miady amin'ny Kolikoly (NACC) mba hanadihady momba io tranga io.
Fanehoan-kevitra vitsivitsy avy amin'ny Yahoo! Answers:
Tamin'ny 16 Jolay 2010, nahemotry ny NACC indray ny fanapahan-keviny amin'ity tranga ity, ary mbola tsy nanome daty ihany izy ireo amin'ny hanomezany ny fanapahan-kevitra farany .